Amabhayisikobho - Mag Incredible
Ama-Movie Wokubuka E-Bangalore Kule Mpelasonto
by Shwi Nomtekhala
IBangalore yidolobha lokuzijabulisa. Kusuka emakilabhini, ema-disco, ezitolo ezinkulu kuya ezindaweni zokudlela, konke sekumboziwe uma kukhulunywa ngokujabulisa izakhamuzi zakhona. Buza abantu baseBangalore ukuthi yini abayithanda kakhulu; kufanele kube ngama-movie. Ngaphezulu koku…
IGreat Hotel neTheatre Break eLondon
by USofia L.
Wake wayibona iDisney smash hit musical, iLion King? Izethameli zeLion King ezivela emhlabeni wonke ziye zajatshulelwa ngalo mbukiso omuhle ogcwele kakhulu: - - Imibala ehehayo - Imiphumela emangazayo - Umculo ohehayo Izinkulungwane zabantu ziya eLondon…
I-GORGEOUS DEEPIKA PADUKONE IMAGES KU-HD
U-Deepika Ngezinsuku Zakhe Zokumodela: Omunye wezihlabani ezishisa kakhulu ze-Bollywood, u-Deepika Padukone, wayekade eyimodeli ngaphambi kokujoyina i-Bollywood. Uke wahambela u-Wendell Rodricks futhi usebenzele amabhrendi asezingeni eliphezulu afana noLakme noKindfisher. Kodwa ngenkathi ebonakala ku...
I-Hypnotic Dream II (UMary Kills The Ghost)
Zishintsha Kanjani Izindima Zabesifazane Ngaphakathi kweHollywood
Kwangathi 14, 2022
Emuva ekuqaleni kwawo-1980, umdidiyeli wesikrini ongasekho uColin Welland wathi “bayeza abaseBrithani” lapho bemukela indondo ye-Oscar ethi 'Izinqola Zomlilo.' Namuhla, inkulumo-ze yaseHollywood ingase ibe "isenzo abesifazane abeza" njengoba abesifazane abaningi bethatha indima enkulu ...
Ama-Earphone ahamba phambili wokubuka ama-movie
Kwangathi 1, 2022
Ezweni lesimanje, kunabantu abaningi abathinta ubuchwepheshe bamuva. Ubuchwepheshe obuningi obukhulayo buhamba ngaleyo ndlela, abathandi bomculo baningi. Iningi labantu livame ukuzwa izingoma ezizithandayo ngama-earphone, noma ezinye izipikha. Ku…
Qala iqoqo lomculo le-Vinyl
by UHarry C
IVinyl iphinde yahlanya eminyakeni embalwa edlule kanti abalandeli bomculo abaningi bathola i-vinyl okokuqala ngqa kanti abathandi bomculo abaningi bathola ukuthokozela kwabo okuphakathi. Kunemibono eyiphutha mayelana ne-vinyl nokuthi yini ehambisana nokuzilibazisa…
Ukuqasha Umenzi Wempahla: Izinto Ezibalulekile Okufanele Uzicabangele
by U-Olivia B
Uma unombono ngomkhiqizo oyingqayizivele ofuna ukuwuthengisa, uzodinga ukudala uhlobo oluthile. Uhlobo olusebenza ngokugcwele empeleni ngumkhiqizo we-barebones ohambisa umbono. Ukuthi ngabe wakhe inkinobho ehlukile noma okuningi…
Izifiso nama-Movie Quotes Kusuka ku-Movie Yakho Ehamba phambili
Impilo iyisipho esisodwa esihle sonke esinikezwe sona. Impilo eyodwa nobudlelwano obuningi - umndeni, abangani nabanye abaseduze nabathandekayo benza izimpilo zethu zizuze. Sihlala ndawonye, ​​sabelana ngezinjabulo, sigubha futhi sisebenza kanzima ukunqoba izithiyo eziningi ku…
U-Luke Bryan Ubengumamukeli Wamuva Womklomelo Omuhle Kakhulu
by U-Amy L
ULuke Bryan ube ngumamukeli wakamuva womklomelo omuhle kakhulu! UBryan uwine indebe ye-Entertainer of the Year kuma-CMA Awards ka-2015 ngoNovemba 4, nokwenze kwaba okwesibili kulandelana. Lo mculi owaziwayo weqa esihlalweni sakhe ngenjabulo…
1 2 3 ... 6 Olandelayo